Web 3.0 မွာပြProbleနာရှိနေသေးသည် Martech Zone
စုဆောင်းခြင်း၊ ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း၊ တွစ်တာ၊ ရှာဖွေခြင်း၊ မျှဝေခြင်း၊ မျှဝေခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ အညွှန်းပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ပုံစံချခြင်း၊ မီးမောင်းထိုးပြခြင်း၊
Web ကို 0- ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ CERN မှ Tim Berners-Lee ကအင်တာနက်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ ပထမဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် World Wide Web Project ဖြင့်ပုံဖော်ခဲ့သည်။
Web ကို 1.0၁၉၉၉ တွင် ၀ က်ဘ်ဆိုက် ၃ သန်းရှိပြီးသုံးစွဲသူများသည်အဓိကအားဖြင့်နှုတ်ဖြင့်နှုတ်ဖြင့် Yahoo!
Web ကို 2.0။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ဆိုဒ်ပေါင်း ၈၅ သန်းရှိသော်လည်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောဆိုဒ်များ၊ ဝီကီနှင့်လူမှုမီဒီယာသည်သုံးစွဲသူများသည်အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည့်နေရာတွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။
Web ကို 3.0။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်အသိဉာဏ်ရှိသောရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များဖြင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါင်းဘီလီယံကျော်ရှိနေသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်၎င်း၏စနစ်ကိုထိထိရောက်ရောက်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့်ရှာဖွေခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။
Web ကို 4.0အရာအားလုံးချိတ်ဆက်ထားသည့်၊ စနစ်များသည်ကိုယ်ပိုင်လေ့လာသင်ယူခြင်း၊ လိုအပ်ချက်များကိုတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အသုံးချခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်ကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခဲ့သည့်အတိုင်းဝက်ဘ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်ယိမ်းယိုင်လာသည်။
ငါ 2010 ခုနှစ်၏နှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ် စီစစ်ခြင်း၊။ ဒီနေ့မှာငါတို့ဟာနီးကပ်နေသေးတယ်ဆိုတာမသေချာဘူး၊ ငါတို့ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူရ ဦး မယ်။ အဓိကအချက်ကငါတို့လိုအပ်တယ် ယခုသော်လည်း။ ဆူညံသံကနားမကြားသေးဘူး
ဆက်သွယ်ရေး၏ဆက်စပ်မှုနှင့်ရည်မှန်းချက်ကိုတိုးတက်စေရန်ကြိုးစားရန်အတွက်ကြော်ငြာတင်ခြင်း၊ အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်စက်သင်ကြားခြင်းများကို Cloud တွင်အသုံးချနေကြသည်။ ပြissueနာမှာ၎င်းတို့အားလုံးသည်အဆုံးအသုံးပြုသူအားဆက်သွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကော်ပိုရေးရှင်းများမှအသုံးပြုသောနည်းပညာများဖြစ်သည်။ ဒါကနောက်ပြန်လှည့်တာပါပဲ။ အသုံးပြုသူကသူတို့ပေးတဲ့သတင်းအချက်အလက်နဲ့သူဘယ်လိုကျွေးတယ်ဆိုတာကိုအလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်။
ဂူဂဲလ်သည်အနှစ် ၂၀ သာရှိသေးပြီး၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင်၏မေးမြန်းချက်နှင့်ကိုက်ညီသောသော့ချက်စာလုံးများတွင်ညွှန်းထားသောစကားမပြောနိုင်သောအချက်အလက်များကိုသာပေးသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ဆောက်ချင်ပါတယ် အင်ဂျင်ရှာပါ နောက်လာမယ်။ ငါငြီးငွေ့နေတယ်မဟုတ်လား။ မျှော်လင့်ပါတယ် အသံနည်းပညာများအစုလိုက်အပြုံလိုက်မွေးစားခြင်း ဒီနယ်ပယ်မှာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုမောင်းနှင်လိမ့်မယ်။ စားသုံးသူတွေကသူတို့ရှာဖွေနေတဲ့ရလဒ်ကိုရဖို့ရလဒ်များစွာနဲ့လှည့်စားပြီးအလွန်စိတ်ရှည်မယ်ဆိုတာငါမမြင်နိုင်ဘူး။
Firefox, Google နှင့် Apple တို့ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီများကကူညီလိမ့်မည်။ အားဖြင့် ကိုကို ကြော်ငြာခြေရာခံပိတ်ထားသည် တပ်ဆင်မှုပြုသည့်အခါ၎င်းသည်တာ ၀ န်ကိုအသုံးပြုသူလက်သို့အပ်လိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ကျွန်ုပ်၏စကားကိုနားမထောင်တော့စေရန်ကျွန်ုပ်သည်စျေးကွက်သမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်နည်းနည်းအံ sound ဖွယ်ကောင်းသည်။ ဒါပေမယ့်ငါဆီလျှော်ပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရင်သူတို့လုပ်သင့်တာကလုံးဝမဟုတ်ဘူး။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်မက်ဆေ့ခ်ျကိုလူတိုင်းထံပေးပို့ပြီး၎င်းကိုမက်ဆေ့ခ်ျအားခွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
GDPR လည်းကူညီလိမ့်မည်။ ငါသက်ရောက်မှု၏အဘယ်အရာကိုမျှမစိတ်ကူးရှိသည် ကန ဦး GDPR ကုမ္ပဏီတွေမှာပါ ၀ င်ခွင့်ပေးတဲ့စာတွေ၊ ငါကဒါကိုအကြီးအကျယ်ကိုင်တွယ်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်နေပေမဲ့အဲဒါဟာငါတို့ဆီကနေပိုကောင်းတဲ့စျေးကွက်သမားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သောသတင်းများ၊ ပေးပို့စဉ်နှင့်အလားအလာရှိသူသို့မဟုတ်ဝယ်သူတစ် ဦး စီ၏တန်ဖိုးကိုကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်စိုးရိမ်ပူပန်ပါက၎င်းတို့ထဲမှအနည်းငယ်ကိုသာပေးပို့မည်ဟုကျွန်ုပ်သေချာပါသည်။ အကယ်၍ စားသုံးသူတွေကိုဗုံးကြဲမခံရဘူးဆိုရင်၊
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများနှင့်ဖောက်သည်များကိုသူတို့လေးစားမှုဖြင့်နားထောင်ပြီးဆက်ဆံသောနည်းပညာကုမ္ပဏီများသည်ဆက်သွယ်ရေးမှတစ်ဆင့်တန်ဖိုးများကိုသေချာစေရန်နောက်ဆုံးတွင် Web 3.0 ၏အောင်မြင်သူများဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုထင်ပါသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာလုံခြုံမှုမရှိတဲ့ Web 4.0 (Internet of Things) ထဲကိုရောက်နေပါပြီ။
Tags: စုစုပေါင်းနေပြည်တော်အမျိုးအစားစုဆောင်းတူးစီစစ်ခြင်းအောက်ပါပုံစံမီးမောင်းထိုးပြindexinglike နှိပ်ကွန်ယက်မေးရှာဖွေနေsemantic ဝဘ်မျှဝေခြင်းsortingဖွဲ့စည်းပုံထိ မိ. လဲစရာမှတ်သားခြင်းtweetingဝဘ် 3ဝဘ် 3.0
မေလ 11, 2010 မှာ 5: 55 AM
ငါ မင်းကို ရှာဖွေတဲ့ အင်ဂျင်ကို တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဖွဲ့စည်းပုံမညီသော အချက်အလက်များကို စစ်ထုတ်ရန် ကွန်ပျူတာများကို အားကိုးမည့်အစား ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည် သင့်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် အားကိုးပါသည်။
သော့ချက်စကားလုံး များလွန်းခြင်းကြောင့် Frankenstein ၏ ရှုပ်ထွေးနက်နဲသော ဘီလူးတစ်ကောင်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ယခုအခါ လုပ်ငန်းငယ်တစ်ခုသည် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိရန် မလုံလောက်တော့ဘဲ၊ Google ၏ အယ်လဂိုရီသမ်များကို နှစ်သက်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့တွင် SEO ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ အကြောင်းအရာနှင့် မက်တာဒေတာကို တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒါက ရူးသွပ်မှုပဲ။
ကျွန်ုပ်အပါအဝင် Right-Time နည်းပညာများသည် သင့်အား *သင်လိုချင်သည့်အရာ*ကို ရှာဖွေနိုင်ပြီး သော့ချက်စကားလုံးငရဲမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက အကြောင်းပြန်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ ကုမ္ပဏီအမည် သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ဖြင့် သင့်အား စပမ်းမတင်လိုပါ။ အားလုံးက "opt-in" အကြောင်းပါ။
မေလ 11, 2010 မှာ 9: 43 AM
ကိုးကားချက်တောင် မပေးခဲ့ဘူးလို့ မယုံနိုင်ဘူး 😉
မေလ 11, 2010 မှာ 4: 32 pm တွင်
Wolfram Alpha ကို သင်ကြားဖူးပါသလား။ (http://www.wolframalpha.com/) အဲဒါက "ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်"
မေလ 13, 2010 မှာ 7: 48 AM
မင်္ဂလာပါ Cassie။ Wolfram သည် လမ်းကြောင်းမှန်သို့ ခြေလှမ်းတစ်လှမ်း ဖြစ်နေပြီဟု ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
လုံးဝသဘောမတူပါဘူး။ မှန်ပါသည်၊ ဝေါဟာရပြဿနာများအတွက် ရိုးရာကိန်းဂဏန်းနည်းပညာများကို သင်အသုံးပြုပါက ဒေတာသည် လွန်ကဲနေပါသည်။ Google က ဤသို့လုပ်ဆောင်သည် — ရလဒ်များသည် အံ့မခန်းအမြီးရှည်စေပြီး သုံးစွဲသူများကို စိတ်ပျက်စေသည်။
Adaptive heuristics ၏ ပေါ်ထွက်လာသော နယ်ပယ်များသည် ဗီဒီယိုတွင် ဆွေးနွေးထားသည်များထက် semantics နှင့် ပိုမိုသက်ဆိုင်ပါသည်။
နောက်ထပ် လိုက်ကြည့်ရန်… ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းကို ယခု လုပ်ဆောင်နေပါသည်။